GSDM: Nampihaona ny mpikaroka, ny mpiantsehatra amin’ny tontolo ambanivohitra ary ny tantsaha - ewa.mg
News - GSDM: Nampihaona ny mpikaroka, ny mpiantsehatra amin’ny tontolo ambanivohitra ary ny tantsaha
Cet article GSDM: Nampihaona ny mpikaroka, ny mpiantsehatra amin’ny tontolo ambanivohitra ary ny tantsaha est apparu en premier sur déliremadagascar.
L’article GSDM: Nampihaona ny mpikaroka, ny mpiantsehatra amin’ny tontolo ambanivohitra ary ny tantsaha a été récupéré chez Délire Madagascar.
Teatra: hiaka-tsehatra etsy amin’ny AFT ny « Lovasoa »
Mitohy ny fampisehoana teatra ao amin’ny Alliance française (AFT) etsy Andavamamba. Hiaka-tsehatra, ny alahady 7 jolay izao, amin’ny 3 ora tolakandro ny Sakaizan’ny teatra ao amin’ny lycée Jean Joseph Rabearivelo.Hoentin’izy ireo an-tsehatra amin’izany ny piesy mitondra ny lohateny hoe « Lovasoa ».Hisy fizarana roa ny fandaharam-potoana ka handravaka ny tapany voalohany ny antsan-tononkalo, sanganasan’i Jean Joseph Rabearivelo amin’ny teny malagasy, amin’ny teny frantsay ary amin’ny teny espaniola, ary lalaovina toy ny filalaovana teatra. Ravahina “Hiranay omaly”, sanganasan’i Naly Rakotofiringa, i Barijaona, Ramaroson Wilson, sns, izay an’i Jean Joseph Rabearivelo, ny tononkira sasany, toy ny « Fasana faharoa », « Aza anontaniana ny anton’izao », « Eritreritra fahavaratra », sns…Ao anatin’ny fizarazana faharoa kosa no hilalaovana ny sombiny amin’ny tantara « Imaitsoanala », nosoratan’i Jean Joseph Rabearivelo. Marihina fa ity ny « opéra » malagasy voalohany, izay Andrianary Ratianarivo ny nanao ny feony. Tsy « opéra » no atolotra amin’ny alahady izao fa sombiny amin’ny piesy teatraly ihany.Teatra Frantsay sy ny antoko mpihira LJJRNandrindra ity « Lovasoa » ity Ravaloson Mbato, mpampiofana teatra, mpandrindra an-tsehatra. Ankoatra ny Sakaizan’ny Teatra malagasy, hanampy azy ireo koa ny Teatra frantsay ary ny antoko mpihira ao amin’ny LJJR. Raha tsiahivina, ny volana jona 2018 no naseho voalohany ny « Lovasoa », tao amin’ny AFT ka nahasarika olona maro, izay naniry ny hamerenana azy. Izay ny anton’izao fampisehoana izao.Landy R.L’article Teatra: hiaka-tsehatra etsy amin’ny AFT ny « Lovasoa » a été récupéré chez Newsmada.
Loza tsy nahy sa ankasomparana ? Friperie iray kaontenera kila hotohoton’ny afo
Kila hotohoton’ny afo tsy nisy noraisina intsony ny remorque kaontenera feno entana balle friperie tao An­ta­nimalandy Mahajanga, omaly tolakandro. Tsy fantatra ma­zava ny antony nahatonga ny firehetana fa ny afo nijoalajoala no nanaitra ny olona teny amin’ny manodidina. Na teo aza anefa ny fisian’ny afo, niezaka nanala ireo entana azo novonjena tao anatin’ity kaon­tenera ity ihany ny tompony. Nisy ny avotra, saingy ny an­kamaroany kosa kilan’ny afo tsy nisy noraisina intsony.J.CL’article Loza tsy nahy sa ankasomparana ? Friperie iray kaontenera kila hotohoton’ny afo a été récupéré chez Newsmada.
Nopotehina teny amin’ny toerana fanaovana fanazaran-tena fitifirana, eny Langaina, ny talata teo, ireo fitaovam-piadiana isan-karazany nogiazan’ny zandary, efa hatrany amin’ny andron’ny Tetezamita tany. Anisan’izany, ohatra, ny baomba, ny grenady, ny vanja sy ny zava-mipoaka…Notontosaina teny amin’ny kianja fanazaran-tena mitifitra (champ de tirs) any Langaina, afakomaly ny famotehana ara-pomba miaramila ireo baomba vita tanana tratran’ny zandarimaria sy fanandramana ireo basy mahery vaika samy nogiazana nandritra ny taona maro teo anivon’ny fari-piadidian’ny zandarimariam-pirenena Antananarivo. Araka ny fanazavan’ny kaomandin’ny Fari-piadidian’ny zandarimariam-pirenena eto amin’ny faritra Analamanga (CIRGN), ny Jly Rakotondrazaka Andriantsarafara, nisy grenady mahery vaika sy fanazaran-tena, baomba vita tanana ary ireo kazarana baomba nipoaka na tsy nipoaka tamin’ny andron’ny Tetezamita no navondrona ary nopotehina tamin’ny fomba ofisialy. Nisy ny fitanana an-tsoratra natao teny Langaina taorian’ny famotehana ireto baomba ireto. Nisy koa andrana teknika natao tamin’ireo basim-panjakana nogiazana tratra nandritra ny asan-jiolahy maro teto an-drenivohitra, araka ny fanazavan’ity manamboninahitra ity hatrany.Homena ireo tobin’ny zandary ny basy mbola azo ampiasaina…Araka ny baiko sy toromarika nomen’ny Sekreteram-panjakana miadidy ny zandarimariam-pirenena (Seg), ny Jly Ravalomanana Richard sy ny kaomandin’ny zandarimariam-pirenena (COMGN), ny Jly Andrianjanaka Njatoarisoa dia hanatanteraka izany koa ireo fari-piadidiana sy ny vondron-tobim-pileovan’ny zandarimaria manerana ny Nosy. Marihina fa nopotehina teo imason’ny solontenam-bahoaka ireto baomba fampiasan’ny miaramila sy ireo baomba vita tanana na vanja tratra ireto. Hisorohana ny loza mety haterany aoriana indrindra rehefa ela loatra ny fe-potoana hitahirizana azy ireny, araka ny fanazavan’ny lehiben’ny CIRGN Analamanga hatrany. Ireo basy mahery vaika sy fitaovam-piadiana hafa nogiazana ka hita fa mbola azo ampiasaina kosa dia omena ireo tobin’ny zandarimaria any amin’ny faritra mena mba hanampiana ireo fitaovana enti-mamongotra ny tsy fandriampahalemana.Jean ClaudeL’article Ho fisorohana ny loza mety haterany: nopotehina ireo baomba, grenady, vanja nogiazana hatramin’izay a été récupéré chez Newsmada.
Fifidianana FMF: voatazona avokoa ireo kandida 5 hifaninana
Navoakan’ny Comité de normalisation, omaly ny lisitra ofisialy faran’ireo kandida hifaninana amin’ny fifidianana izay hitantana ny federasiona malagasy ny baolina kitra. Fifidianana hotanterahina ny 24 aogositra ho avy izao any Toliara. Tsy araka ny siosion-dresaka izay nahoraka tato ho ato, izay nilaza fa mety hisy ny ho voailika tamin’ireo kandida tao anatin’ny lisitra voalohany. Voatazona avokoa ireo kandida miisa dimy izay nahafeno ny fepetra amin’ny firotsahana hofidina ho filohan’ny FMF, hahitana an’Andriamiasasoa Doda Nirimboavonjy, i Arizaka Rabekoto Raoul, i Mohamad Abdillah Aboudou, Rakotomamaonjy Neypaitraiky ary Rasoamaromaka Herilalaniaina. Marihina, namoaka ny fanapahan-kevitra ihany koa ilay « commission de recours » mahakasika ny fitarainana nataon’ny kandidà Arizaka Raoul amin’ny hanalana tsy ho mpifaninana ireo kandidà telo, izay nanambara fa efa depiote sy tompon’andraikitra amin’ny antoko miaraka amin’ny fitondram-panjakana izy ireo ka mety hisy ny fitanilàna. Nanamafy ity vaomiera ity fa tsy mitombina ny fitarainana ka dia afaka mirotsaka soa aman-tsara ireo kandidà telo ireo. Anio moa no hanaovana ny antsapaka amin’ny filaharan’ireo kandida 5 ireo.Mi.RazL’article Fifidianana FMF: voatazona avokoa ireo kandida 5 hifaninana a été récupéré chez Newsmada.
Nandiso ny tsaho niely ny fianakaviana : velon’aina soa aman-tsara i Henri Ratsimbazafy
Tsy voalohany izay no nisy tsaho niely mikasika ny hoe fahalasanan’i Henri Ra­tsimbazafy. Omaly indray, niparitaka tao amin’ny tambajotran-tserasera “face­book” fa hoe nodimandry ity andrarezin’ny zavakanto ma­lagasy ity. Poa toy izay, niparitaka ny fizarana, tsy nisy fanamarinana natao amin’ireo akaiky azy akory… Ma­za­va loatra fa efa maro ireo naneho fiaraha-miory, tao ny efa latsa-dranomaso, satria andrarezina no resahina. Soa fa vetivety koa dia nandiso ny vaovao niely ny fianakavian’i Henri Ratsim­bazafy. “Ry mpizara vaovao tsy marina, esory eny amin’ny rindrinareo ny filazana fa maty i Papa. Hamarino alo­ha vao mizara. Soloy hoe ho ela velona anie izy”, hoy ny navoakan’ny zanany, i Zo-Hely Ratsimbazafy, ny ma­raina. Nampiany hoe “Tohiny sy fehiny: niala tsiny ilay olona niaingan’ny tsaho. Fandraisana diso no nahatonga azy nanao izany… Tsy omeko tsiny izy, mety ho diso fandray avokoa ny rehetra ka raisintsika am-pitoniana”, hoy izy ny hariva. Mbola nanamafy izany ny talen’ny Omda, raha azonay antso ny maraina. “Tena vao avy niresaka taminy an-telefaonina aho. Salama ary mi­resaka tsara izy fa tsy araka izay tsaho niely”, hoy Ranja­rivo Haja. Ny nahafinaritra kosa, ni­raradraraka ny firarian-tsoa ho an’i Henri Ratsimbazafy, ho ela velona, hiaraka hiriaria amin’ny fianakaviany sy ny mpankafy ny kantony eto ha­trany ivelany. Manampy izany firarian-tsoa izany koa izahay eto amin’ny Fanora­tana.Zo ny AinaL’article Nandiso ny tsaho niely ny fianakaviana : velon’aina soa aman-tsara i Henri Ratsimbazafy a été récupéré chez Newsmada.